यौन शोषणबाट रहेको गर्भपतन गराउन खोज्दा बालिकाको अवस्था गम्भीर ! – इन्सेक
यौन शोषणबाट रहेको गर्भपतन गराउन खोज्दा बालिकाको अवस्था गम्भीर !
बाँके ०७६ जेठ २ गते
१३ वर्षीया बालिकाको यौन शोषणका कारण रहेको गर्भपतन गराउन खोज्दा स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेकोे प्रहरीले जनाएको छ ।
यौन शोषणबाट रहेको गर्भ वैशाख ३१ गते असुरक्षित तरिकाले औषधि सेवन गरी पतन गराउन खोज्दा अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि पीडित बालिकालाई उपचारका लागि भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा पुर्‍याएकोमा त्यहाँ उपचार सम्भव नभएकोले सोहीदिन कोहलपुर मेडिकल कलेज लगी आइसियू कक्षमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी अरुण पौडेलले बताए ।
एसपी पौडेलका अनुसार प्रहरीले गस्ती गर्दै गर्दा बालिका बिरामी अवस्थामा फेला परेको र उनलाई नेपालगञ्ज उपमनपा–१० बाट उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याइएको हो ।
बालिका के कसरी गर्भवती भइन् र उनलाई कसले वा कसरी गर्भपतन गराउन खोज्यो भन्ने बारे गहन अनुसन्धान भइरहेको एसपी पौडेलले बताए ।